Avatar ထားရအောင် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Avatar ဆိုတာ ကိုယ့် username အောက်မှာ ပုံလေးတွေ ထားတာပါ။ အချို့က လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံလေးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချို့ကတော့ ရိုးရိုးပုံငယ်လေးတွေပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်မှာ သာမန်အသင်းဝင်ကစပြီး အက်ဒမင်အထိ အသင်းသားအားလုံး avatar တင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာ avatar တွေကို ကျွန်တော်တို့ server ပေါ်မှာ လက်ခံသိမ်းထားရင် အသင်းဝင်များလာတာနဲ့ အမျှ server down သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒုတိယနည်းကို သုံးကြပါမယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်။ အသင်းဝင် အသစ်တွေ လုပ်တတ်အောင်ပါ။ သေချာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် လွယ်ပါတယ်။
၁။ အရင်ဆုံး Home Page က User CP(ပြင်ဆင်ရန်) ကိုသွားလိုက်ပါ။ ပုံကိုကြည့်ပါ -
၂။ User CP ကိုရောက်ရင် Edit Avatar(သရုပ်ပြပုံငယ်ပြင်ရန်) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပုံမှာ မြှားပြထားပါတယ် -
၃။ ပြီးရင် အောက်ကပုံမှာ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ နေရာလေးရှိပါတယ် ။ မှတ်ထားလိုက်ပါ။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုသေးပါဘူး။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက သူ့အောက်မှာ Option2ဆိုပြီး Upload avatar from your computer ဆိုတာရှိပါတယ်။ မသုံးကြပါနဲ့။ ကျနော်တို့ ဆာဗာ ပေါ်ကို
၀န်ပိလို့ပါ။ အသင်းဝင် အားလုံးရဲ့ avatar တွေအားလုံးကိုသိမ်းပေးဖို့ နေရာမလောက်ပါဘူး။ ဒီတော့ Option 1 ကိုပဲအသုံးပြုပေးကြဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ မော်ဒရေတာတွေလဲ စစ်နေမှာပါ။ ဆိုဒ်ကို ဒါရိုက် avatar တွေ upload လုပ်နေကြတယ်ဆိုရင်တော့ သာမန်အသင်းသားများ avatar သုံးလို့မရဖြစ်သွားမှာပါပဲ။ ကူညီကြပါ။
၄။ ခုကျွန်တော်တို့ avatar လုပ်မယ့် ပုံလေးကို အခြား ဆိုဒ်မှာ host လုပ်မယ်ဗျာ။ ဒီတော့ http://www.imageshack.us ကိုသွားလိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့ site ကိုရောက်သွားပါမယ် -
၅။ အဲဒီက Browse ဆိုတာကနေ သင့် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့ avatar လေးကိုသွားရွေးလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ Open ပေးလိုက်ပေါ့။ပုံမှာကြည့်ပါ -
၆။ ပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံမှာဝိုင်းထားတဲ့ Host it ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ -
၇။ Upload ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ လင့်တွေပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီ့အထဲက စတုတ္ထမြောက် လင့် " Direct Link to image " ဆိုတာကို copy လုပ်ပါ -
၈။ ခု ဖိုရမ်ကို ပြန်သွားမယ်။ ဖိုရမ်က စောစောက မြှားပြထားပြီး ဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့ နေရာလေးမှာ ရှိနေတဲ့ အရင် စာသားတွေကို ဖျက်ပါ။ ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ -
၉။ ပြီးတာနဲ့ ခုန ကော်ပီယူလာတဲ့ လင့်ကို ဒီကွက်လပ်လေးမှာ Paste ချလိုက်ပါ -
၁၀။ အဲဒါပြီးတာနဲ့ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့ Save Changes ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ -
၁၁။ အဲဒီ့နောက်မှာတော့ သင့်ကိုယ်ပိုင် avatar လေးကို ခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် -
အပြည့်အစုံရှင်းပြထားပါတယ်။ လုပ်ကြည့်ပါ။ မခက်ပါဘူး။ သူများလုပ်ပေးလို့မဟုတ်ပဲ ကိုယ်တိုင်သိသွားလို့ ပျော်ရတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရှင်းပြပေးတာပါ။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
Last edited by Aung Aung; 08-11-2008 at 04:30 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဆိုင်ကျောက်, ဆွိ, ဒဿဂီရိ, ဇော်ရဲပိုင်, amaung344, AZM, bonge, dusk, kaung kin lu, ko lin, Starfire, sweetylemon7, zo
13-04-2007, 03:00 AM
Re: Avatar ထားရအောင်
ကောင်းပါတယ် ..အက်ဒမင်ကြီးဖြစ်ပေမယ့် ..
သေချာညွှန်ကြားပေးတာကို ..တကယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာ ..
မိသားစုလေးထဲမှာ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က အရေးပါသလိုမျိုးပေါ့နော် ..
ကိုရဲနောင်ကြီး မြန်မြန်ကျန်းမာပါစေဗျာ ..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ငြိမ်းချမ်း(nyeinc8an) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ယွန်းယွန်း, soe nyi nyi, zo
တည်နေရာ: on the earth
ပို့စ်6ခုအတွက် 13 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Invalid URL လို့ပဲပေါ်တယ်ဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ supercupid အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ယွန်းယွန်း, zo
22-04-2007, 07:18 AM
ကျနော် ခု စမ်းကြည့်တယ်။ ရတယ်ဗျ။ ကိုစူပါ ဘယ်နေရာမှာ နည်းနည်းလွဲသွားလဲ မသိဘူး။ပြန်စမ်းကြည့်ပါအုံး။ မရရင်တော့ ပြောပါဗျာ။
22-04-2007, 07:31 AM
တော်သေးတာပေါ့။ ဒီတစ်ခါ ခါးဝတ်ပါလို့။ ဟားဟားဟား။
22-04-2007, 07:37 AM
(ခုမှ အပေါင်ဆိုင်ကပြန်ရွေးလာတာ ဘယ်ဒူမှ လျှောက်မပြောနဲ့နော် )
27-04-2007, 01:27 AM
ကဲကဲ ... ဘာလိုလဲပြော ။ ၀ယ်ပေးမယ် ။
ရေှာ့ဗျာ ... ဒေါ်လာအသစ် .. နောက်ဆုံးပေါ် ။
Last edited by richtt; 27-04-2007 at 01:27 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ richtt အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
27-04-2007, 10:44 AM
ပြမယ့်ပြ ကျောဘက်ပါ ပြတာတော့ မဟုတ်ဘူး
ကျနော့်မှာ ဒေါ်လာဆိုတာ ပြမယ့်သူရှိမှ မြင်ဖူးရတာမို့ပါ .. အဟီး
Slow, Quiet, Dwarf & Small [SIZE=4][COLOR=magenta][I]Homo sapien[/I][/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ MN အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
28-04-2007, 12:27 AM
ကပ်စေးမနဲ ရပါဘူးဗျာ ... ကဲ ရော့ရော့ .. ပိုက်ဆံတွေ ကြဲလိုက်ပြီဗျို့ ....
17-05-2007, 12:54 PM
Thanks but it;s still not enough for me
19-05-2007, 06:22 AM
Last edited by ဂျစ်တူး; 19-05-2007 at 06:23 AM..
26-05-2007, 09:11 AM
အခုမှဘဲ ကျနော်လည်း Avatar ထားလို့ရသွားတယ်ဗျာ . .
်ဖိုရမ်မှာ Register လုပ်ပြီးတာနဲ့ Profile ထဲသွားပြီး Avatarလေး Signature လေးထည့်မလို့လုပ်တာ၊ Signature ကတော့ စာကြောင်းမို့ ပြဿနာမရှိဘူး . . ( ဒါတောင် Firefox ကနေ IE ပြောင်းသုံးလိုက်ရသေးတယ်. . ) Avatar ဘက်လည်းရောက်ရော လင့်ပဲတောင်းထားတာကိုး . .
ဒီပိုစ်လေးဖတ်ပြီးတော့မှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်ဗျာ. .
နောက်တစ်ကြိမ်ကျေးဇူးပါ ကိုရဲနောင်ရေ . .
( အင်းဒီရက်ပိုင်း ကိုရဲနောင်နဲ့ ကိုစေတန်ကို ကျေးဇူးတင်နေတာ အကြိမ်ဘယ်လောက်တောင်ရှိသွားပြီလည်းမသိတော့ဘူးဗျာ . . လူချင်းတွေ့တော့မှဘဲ လက်ဖက်ရည်တိုက်ခိုင်းရမယ် . . )
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 61 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Re: Avatar ထားရအောင် လိုက်ပြီနော်
ညီလေးရေတော်တယ်ကွာလုပ်ထားတာ သေချာကိုရှင်းပြထားတာပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ
မမေ့နိူင်သောအရာအားလုံးသည် ရင်မှာထာဝရသစ်လွင်လျှက်ရှိ၏ ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ thureinhtut အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit thureinhtut's homepage!
Find More Posts by thureinhtut
Originally Posted by KOHTUT_2007
ကိုထွဋ်က တယ်ချောပါလား။ ကိုရီးယားမင်းသားကျနေတာပဲ။ ကျနော့်ညီမ အိမ်ထောင်စောစောကျသွားတာ နာတာပဲ။ အိမ်ကျမှ ကိုထွဋ်အကြောင်းပြောပြောပြီး ရိုက်အုံးမယ်။ X-(
" မသောက်နိုင်သောအရက်အားလုံးတို့သည် ရင်မှာထာဝရမောပန်းစေလျှက်ရှိ၏ " mrgreen
Last edited by ကိုပိုင်; 19-06-2007 at 08:15 PM..
Re: Avatar ထားရအောင် လိုက်ပြီနော် ကော်ကော်တိုက်
Originally Posted by KoPaing
21-06-2007, 03:13 PM
စမိုင်းမေ လုပ်လိုက်တာ ဘယ်တစ်ခုနဲ့ ရသွားတာလဲတော့မသိဘူးရှင့်
ပထမ ဒီတော့ပစ်လေးမဖတ်ခင်က Browse နဲ့ တင်ထားတာ
ဒီတော့ပစ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲ ဘယ်တစ်ခုနဲ့
အက်ဒမင်ကြီးရှင့် စမိုင်းမေ လုပ်တာ ဘယ်တစ်ခုနဲ့ အဆင်ပြေသွားလဲမသိလို့
အဆင်မပြေဘူဆိုရင် စမိုင်းမေ ပြန်ပြောင်းလုပ်ပါ့မယ်ရှင့်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ smilemay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by smilemay
21-06-2007, 05:09 PM
အဆင်ပြေပါတယ် ညီမ။ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ အကိုက မင်းတို့ ခက်နေမှာစိုးတာပဲ ရှိတာ။ လှပါတယ် avatar လေးက။
24-06-2007, 11:26 AM
ပို့စ် 57 ခုအတွက် 78 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပဲအကို အခုလို Avatar လေးနဲ့ ဆိုတော့ပိုလှသွားပေါ့
ကျွန်တော့် Avatar လေးရောလှရဲ့ လားမသိဘူး
အားလုံးကိုစွန့် လွှတ်ရရင်တောင် သတိရခြင်းကိုငါပိုင်တယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ julydream အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit julydream's homepage!
Find More Posts by julydream
24-06-2007, 03:22 PM
Signature လေးက အဓိပ္ပါယ်အရမ်းကောင်းချင်ပေမယ့်
စာလုံးပေါင်းလေးတွေ နဲနဲ နေရာလွဲနေတယ်ကွယ် ...
အတိတ်းမှာကျန်ရစ်မဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သမိုင်း လှပနေဖို့အတွက်
ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်ကို အလှပဆုံ? ဖြစ်အောင် ဖန်တီးရမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ everlearner အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
28-06-2007, 09:43 PM
အစ်မတော့ Avatar ထားတာအဆင်မပြေသေးဘူး....နောက်ရက်မှကြိုးစားဦးမယ်....ဒီညတော့အိပ်ချင်ပြီ...See u..
Originally Posted by Nalthu
ဘေးမှာရှိနေတာ avator မဟုတ်ဘူးလား - -------- ???
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ KZaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အဲ...ဟုတ်သားပဲ...ပြထားတဲ. Procedure အတိုင်းအစဉ်လိုက်မပေါ်လာတော့ မရဘူးပဲအောက်မေ့လိုက်တာ...ဖိုရမ်ကိုဖွင့်မကြည့်လိုက်မိဘူး....ကျေးဇူးပါပဲနော်... So sorry...
16-08-2008, 07:41 AM
ပြန်စာ - Avatar ထားရအောင်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဆွန်မလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဆွန်မလေး
မြန်မာလိုပဲ ပေါ်နေတယ်ဆိုတာ ပို့စ်နံပါတ်(၁)မှာ ပြထားသလို အင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်လို့ ပြောတာလား။
အဲ့ဒါ မြန်မာလိုမဖြစ်ခင်က ပုံတွေမို့လို့ပါ။
User CP ဆိုတာ အပေါ်က “ပြင်ဆင်ရန်” ကိုပြောတာပါ။
အဲ့ဒါကို နှိပ်ပြီးရင် Edit Avatar ဆိုတာ “သရုပ်ပြပုံငယ်ပြင်ရန်” ကိုနှိပ်ပါ။
နည်းလမ်း(၁) - အခြားဝက်ဆိုက်တခုခုတွင် တင်ပို့ထားသော လိပ်စာအားဖြည့်စွက်ခြင်း။ (Enter the URL to the Image on Another Website)
နည်းလမ်း(၂) - သင်အသုံးပြုနေသော ကွန်ပျူတာမှ ပုံကို ဖိုရမ်သို့တင်ပို့ခြင်း။ (Upload Image From Your Computer)
ပို့စ်နံပါတ်(၁)မှာ ရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်း ဆက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
20-08-2008, 04:33 PM
တည်နေရာ: out of my dream
ပို့စ် 369 ခုအတွက် 1,932 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မဒီ သရုပ်ပြပုံငယ်ကို အသစ်တင်ချင်ပါတယ်.........မဒီတင်ချင်တဲ့ ပုံက လှုပ်နေတဲ့ပုံလေးပါ..... အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို တင်လိုက်တော့ ပုံလေးက မလှုပ်ပဲ အသေ ဖြစ်နေပါတယ်.......အဲဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ.........ကူညီကြပါအုန်းဗျိုး............
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မဒီ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မဒီ
20-08-2008, 04:44 PM
ကျနော် တစ်ခါဖြစ်ပါတယ် ၊ browser cookie တွေရှင်းလိုက်တာရသွားတယ် ၊ web ပေါ်မှာသွားတာများ site တွေ စုံရင် cookie တွေများလာပါတယ် ၊ ပြန်ရှင်းလိုက်ရင် OK သွားပါတယ် ၊ အောက်မှာ အလားတူ ပြဿနာ တွေရှိပါတယ် ။
Last edited by sawjonnie; 20-08-2008 at 04:45 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ sawjonnie အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
20-08-2008, 04:45 PM
မဒီ့ ရဲ့ ပုံ size ကကြီးနေလို့များလား။
“အများဆုံးတင်ပို့နိုင်သော ပုံဆိုဒ်မှာ 120*120 pixels ထက်မကျော်ရ ၊ 1.00 MB ထက်မကျော်ရ။” လို့ပြောထားတယ်လေ။
ကွန်ပျူတာကနေ တိုက်ရိုက်တင်တာလား။ image hosting ကနေတင်တာဆိုရင် hosting ပြောင်းပြီး တင်ကြည့်ပါလား။
အောက်ကလင့်ခ်မှာလည်း အဲ့ဒီအကြောင်း ပြောထားပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်ရေးဖိုင်မှာ သရုပ်ပြပုံလေးတင်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် ပုံက မလှုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
:rockers: [SIZE="3"] [COLOR="Black"]rockers boy[/COLOR][/SIZE]
[COLOR="Blue"][I]အိမ်မက်ကဗျာ.....ကာရန်မညီညာလေတဲ့ တို့ အချစ်လေး[/I]......[/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ အောင်ကိုကိုဇော် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by အောင်ကိုကိုဇော်
ဘာ့ကြောင့် အဆင့်သတ်မှတ်ကြပါသလဲ။ Ye Naung အသိပေးချက်များ 20 26-05-2007 06:04 AM
Video to avatar Tha Toe Naung® Applications024-03-2007 04:44 AM